Dameen mana fayya Iowa akka gabaasetti sababa corona virus namni haarawa du’e 15 akka ta’e gabaasni | KWIT
Ogeessi fayyaa South Dakota waliigalati State talaali corona virus fudhatte 22% akka ta’e himan. Qorichi kunis talaali sagantaa faarmaasii federaala fi administreted karaa tajaajila Indian health akka hin dabalanne himan. Oduu conference guyyaa har’aati, ogeessi akka jedhetti taalaalin baayen kan fudhachuu danda’an kan himan yoo tau, garuu wanni kennamu hin jiru.
Winnebago public Health Department guyyaa har’aa waan harawaa Covid-19 kan gad dhiifame yoo tau talaali corona virus 2,000 gad dhiifame. Kunis hawaasni talaali darbe kan fudhatte parsanti 40% kan wal qixxaahudha. Hawwiin isana argachu 80% dha. Lakkoofsi kunis Aangoo seeraa kan Siouxland kan baaye caaludha.
Aanaan mana barumsaa Sioux City barumsaa online dhaan barachuu dhiise barumsa qaaman barachuu irrati akka xiyyeefatu hime.
Guyyaa kibxata, School board federal fandii million$20 kenname akkamitti qarqaarsa barattootaf akka oolchan mari’atani jiran. Maree baaye booda board akka murteesseti sababa corona virus kana rakkoo dingata kan qunname akka qarqaaran murteessani jiran.
Federal fandii kan fayyadamanis sagaanta remedial barachuuf, tutoring, summer school, fi barnoota biraa kan barbaachisuf. Aanan kuni $million 2.8 kan argateedha, summer tarte san keessale waliigalatti $milion 17.3 waggaa kana keessati argatee jira.